Kalaqa፡ Dargaggeessa bidiruu akka biskileetiitti hojjate - BBC News Afaan Oromoo
Kalaqa፡ Dargaggeessa bidiruu akka biskileetiitti hojjate
Bashannanni bishaanirraa bidiruufi dooniidhaan taasifamu kan barameedha. Dargaggeessi amma waa'ee isaa isiinitti himuuf jirru kun garuu bidiruu osoo bishaan hin sochoosin ofumaan akka bisikleetiitti ooffachaa bishaan irra ittiin bashananuuf nama tajaajiltu hojjateera.
Geetaabaalo Makuraa jedhama. Yuunvarsitii Baahir Daaritti barataa waggaa sadaffaati, Muummee barnootaa Mekaanikaal Injinariingii barata.
Yaalii dhiheenya kana bidiruu biskileetii (Pedal boat) hojjachuurraatti taasiseen dinqisiifannaa argateera.
Godina Hawwii magaalaa Jaawwii naannawa pirojaktiin shukkaaraa Xaanaa Balas jiraata.
Naannichatti shonkooraa warshaa shukkaarichaaf galtee ta'u oomishuuf kan oolu seensa magaalichaa irratti hidha ijaarametu jira.
Qonni shonkooraa kun yeroo gannaa bishaan roobaatti kan fayyadamu yoo ta'u, yeroo bonaaatti ammoo jallisii kanumaaf ijaarametti fayyadama.
Geetabaalo dabalatee ijoolleen naanawa sanaa qilleensa ho'aa qabbaneeffachuufi bashanannaaf gara hidha sanaa deemu, bishaanis ni daaku.
''Bishaan hidhaa nu bira jira. Daakuudhaaf ni dhaqna. Egaan yeroo kanatti ture maaliifan bidiruu hin hojjanne jedhee ofii koo kanan gaafadhe,'' jechuun yaadni bidiruu akka biskileetiitti bishaanirra deemu hojjechuu akkamiin akka dhufeef BBC'tti hime.
Jalqabas hojjachuu kan yaade bidiruudhuma isa barame ture. Booda garuu yaadasaa jijjiruun bidiruu biskileetii (Pedal Boat) hojjachuuf murteesse.
''Jalqaba bidiruudhuma barame hojjachuuf yaadulleen booda keessa yaadni bidiruu peedaaliin hojjatu hojjachuu murteesseera'' jedha.
Ta'us garuu bidiruu kana hojjatee xumuruuf waggoota dheeraa eeguun dirqama itti ta'e.
''Bidirucha hojjachuuf yeroo dheeraa hin fudhatu. Garuu rakkoonsaa baasii guddaa gaafata,'' jedha Geetabaaloon.
Kana malees, jalqaba yaaliif wayita hojjatetti qaamni bidiruu sanaa sibiila baayyee waan qabuuf garmalee ulfaachuu irraakan ka'e bishaaniirra deemuuf rakkisaa ture.
Isaan booda ture bidiruu kana tolchuuf meeshaalee tajaajila kennanii fi ulfaatiina salphaa qaban irraa hojjachuun fala gaarii ta'usaa hubachuun haaluma kanaan hojjachuu eegale.
Haalli kunis bidiruun kun salphaadhumatti bishaan irra akka socho'u gargaaruun alattis, baasii xiqqaadhaan hojjachuun xumuruu kan dandeessisu ta'eera.
'Bidiruu kana hojjadhee guutummaatti kanan xumure dhihoo keessa yoo ta'u, waa'ee isaa ergan yaaduu eegalee garuu waggaa lama caaleera'' jechuun dubbata.
Ujummoowwan bidiruu kanaa afuris baayy'inaan biskileetii tajaajila kennee fi mataa (giraayindarii)tti fayyadamuun kan hojjatamaniidha.
Ujummoowwan kunneenis bidiruttiin bishaan irra akka bololaatu kan gargaaruudha. Biskileetichi ammoo taa'umsaaf, bidirucha sochoosuu fi mariisaatti fayyadamuun kallattii barbaadamutti imaluuf dandeessisa.
Konkoolaataan peedaalii bisikileetichaatiin walitti hidhamu ammo bishaan gada boodatti dhiibuun bidirittiin gara fuuladuraatti akka sochootuuf gargaara.
Bidiruun bishikileet eddoodhaa gara eddootti socho'uuf gargaaru isaanitiin alattis akka mala bashannanaa tokkootti itti fayyadamuun dhumma itti bahuuf akkasumsa sochii qaamaa taasisuuf illeen akka fayyadu hima.
Geetaabaloon akka jedhuutti gosawwan bidiruumarsiriitiiwwan garaagaraa irratti arguuf danda'ulleen bidiruun isaa garuu adda.
''Bidiruun bisikileetii inni tolche kun haala salphaa ta'een hojjatamuu fi meeshaalee tajaajila kennan irraa mana keessatti hojjatamuunsaa adda isa taasisa,'' jedha.
Kana malees haala salphaatti hiikamuun deebiifamee ijaaramu kan danda'ufi qabatanii bakkeedhaa gara bakkeetti socha'uuf kan hinrakkifneedha.
''Yeroo jalaqabaatiif hojjadhee ergan xumuree booda namoota gaaraajii keessatti na gargaaran waliin bishaan irratti yaallee,'' jechuu yaalii jalqabaa yaadata.
Gama deeggarsa ilaalatuunis wayita bidiruu kana hojiteetti maatii saan alatti qaamni biraa deeggarsa taasiseef akka hinjirre hima.
Ta'us hiriiyoota isaa gaaraajjii keessa hojjatanis deeggarsa taasisaniif osoo hin galateeffatiin darbu hinbarbaanne.Erga waa'ee bidiruu kanaa midiyaalee hawaasummaa irratti dubbatameen booda miseensoonni yuunvarsitii Baahir daari dubbisan illeen hanga qbatamaan wanti waliin hojjatan akka hinjirru hima.
''Bidiruu kanarrattis wantoota baay'eetuu fooyya'u danda'a,'' jechuun hojichi caalaa fooyyeefamu akka danda'u dubbatu. ''Sadarkaa amma irratti argamu caalaa motaraan akka socho'u taasisuun ni danda'am'' jedha.
Bishaan naanno isaaniitti argamus tajaajila jallisiif kan hojjatame waan ta'ef daakuu fi bidiruudhaa bashannanuuf hin hayyamamu.
Kanaan alattis bidiruutti gargaaramuuf jaakkeettaa yeroo balaa uffachuun dirqama. Kanas argachuuf hanga Baahir Daar deemuun gaafatulleen argachu hindandeenye.
Baayyinni bishaan naannoo isaa xiqqaa ta'unsaa mataansaa rakkina biraati.
Barattuu sadarkaa lammaffaa 'App' kalaqxe
Kana xiyyeeffannaa keessa galchuunis Haroo Xaanaarratti fayyadamuuf gara Baahir Daariitti geessuuf yaade akka ture hima.
Haa ta'u malee Baahir Daariin gahulleen waan hinbeekamneef namoonni bashannanaaf itti fayyadamu dhiibuusaatti lafa bidiritti olkaawwatu dhabuusaa dubbata Geetaabaaloon.
Rakkooleen kunnee hundi ammo abdii kutachisu daragaggoo kana hindandeenye.
Caalaayyuu pirojaktoota biraa hojjachuuf yaada qabaachu dubbata.
''Dhimmoonni yaadaa jiru baayyeetu jira. Garuu qofaakoo hojjachuu hindanda'u. Kanaafuu yoon qaama na gargaaru argadheen eegalu danda'a,'' jedha.
Dargaggeessi kun akka jedhuuttis, sababii hanqina maallaqaatiin karoorawwan isaa hojjachu barbaadu hojiirra olchu hindandeenye.
''Ani barataadha. Maallaqa hinqabu. Osoon bidiruu bisikileetiin hojjadhee sanaan galii argadha ta'e, kanneen yaadaa jiru biraas hojjachun danda'a ture,'' jechuun hanqina dingdee qabu ibseera.
Viidiyoo Barattuu Hagaree: Mirga shamarraniidhaaf dhaabachuufan seera baradha